Iphrofayela Inkampani - Rise (Tianjin) Steel Sales Co., Ltd
Isiqubulo Inkampani: IMIKHIQIZO angcono kakhulu yilawo UKUDLONDLOBALA STEEL
Inkampani Ukufaneleka: I ithobela inkampani isimiso "Ikhwalithi kuqala, ukuphathwa iyona ebalulekile." Inkampani Besiphila ezifanelekayo ISO9001: 2008, i-API isitifiketi, isitifiketi EU, isitifiketi CE. China ngezigaba umphakathi isitifiketi ukuphathwa izinga isitifiketi uhlelo, China ngezigaba umphakathi ifektri ogunyaziwe isitifiketi.
Inkampani Izikhungo: Sukuma ifakwe eziningana zamazwe ngamazwe imigqa ukukhiqizwa eziphambili kanye nemishini ekhethekile ka steel pipe anti-ukugqwala, okwenza kube uyakwazi ukwenza ezihlukahlukene steel pipe anti-ukugqwala ubunjiniyela ezifana Fusion olulodwa futhi double epoxy eziboshiwe (FBE) powder enamathela. Polyethylene Double (2PE) kanye 3PE enamathela, polypropylene double (2PP) lokunameka, 3PP enamathela yangaphandle, ezinengilazi kwangaphakathi futhi yangaphandle plastic. Ngaphezu kwalokho, inkampani unga elingenamikhono steel ipayipi nge anti-ukugqwala upende kuhlanganise IPN8710 enamathela non-enobuthi ku steel pipe odongeni, epoxy amalahle itiyela enamathela, epoxy resin enamathela, futhi usimende nosimende ulwelwesi.
Ukubeka umthengi wokuqala nokuthatha izinga njengoba ukuphila yayo. Le nkampani iye baqashwe onjiniyela senior lokukhiqiza isipiliyoni kanye Ukucaciswa omisiwe pre-ukudayiswa, e-ukudayiswa nangemva-ukudayiswa amasevisi. It lucwaningo i ukulawula izinga jikelele ngokusebenzisa lonke inqubo yokwenza imikhiqizo kanye namasevisi ethu eziqinile, esungula nokubambisana eside nobudlelwano ezizosihlomulisa namanye amakhasimende.